The Rohingya News Bank : 2016
ရခိုင်ပဋိပက္ခတွေကြောင့် ထွက်ပြေးခဲ့သူတွေကို လာမယ့် ၂၃ ရက်နေ့ကစ လက်ခံမယ်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူများ ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်း ပဋိပက္ခတွေကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်ကို ထွက်ပြေးသွားတဲ့ဒုက္ခသည်တွေ ပြန်လည်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဇန်နဝါရီ လ ၂၃ ရက်နေ့က စတင်ဖို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်-မြန်မာ ၂ နိုင်ငံဟာ ဒီကနေ့မှာ သဘောတူ လက်မှတ်ရေး ထိုး လိုက်ပါတယ်။
၂ ဖက် သဘောတူညီချက်အရ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရဖက်ကနေ နေရပ်ပြန်လိုတယ်ဆိုပြီး တင်ထားတဲ့ လျှောက်လွှာတွေထဲက တပတ်ကို လျှောက်လွှာ ၁၅၀၀၀ ပေးပို့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Labels: 2016, mm, MYN - BD, UEHRD, ပြန်လည်လက္ခံရေး, ဘီဘီစီ မြန်မာ, ရိုဟင်ဂျာ
ကိုးတန်ကောက် ကျေးရွာ အုပ်စုကို စစ်သားများ ၀င်ရောက် စီးနင်း ဝင်ရောက်ခဲ့ပုံ
ရသေ့တောင် ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရသေ့တောင်မြို့နယ် ကိုးတန်ကောက် ကျေး ရွာ အုပ်စုကို စစ်သားများ ၀င်ရောက်စီးနင်း ၍ ဒေသခံ များကို ရိုက်နှက် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ အဖိုးတန် ပစ္စည်းများ လုယက်ခြင်း၊ အပြစ်မဲ့များကို ဖမ်း ဆီးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Labels: 2016, mm, RB News, ကိုးတန်ကောက်, ရသေ့တောင်မြို့, သတင်း
Generals reject Malaysian aid to Rakhine State
Sen on Submitted by Elevat, 12/31/2016
Myanmar cannot accept aid shipments carrying food and emergency supplies for Rohingya Muslims from the advisory council of Islamic organisations in Malaysia, said Lieutenant General Kyaw Swe, the military-appointed minister of home affairs.
Labels: 2016, en, Lieutenant General Kyaw Swe, Malaysian Aid, News, Rakhine, Reject
Labels: 2016, AID, en, Flotilla, Malaysian Aid, News, Rohingya
Dhaka, The Bangladesh Foreign Ministry has summoned the Myanmar ambassador in Dhaka and demanded the early repatriation of all its Rohingya Muslim citizens,amedia report said.
Ambassador Myo Myint Than was called to the Ministry of Foreign Affairs to meet Ambassador Kamrul Ahsan, Secretary (Bilateral and Consular), the Foreign Ministry said inastatement on Thursday,
Labels: 2016, Bangladesh, Diplomat, en, Myanmar, News, Refugee, Rohingya, Summon
SEPANG: Malaysian superbikers unite! Three hundred Malaysian superbikers, who collectively call themselves WE BIKERS, have pledged to raise at least RM30,000 for the “Food Flotilla for Myanmar” charity fund.
The humanitarian project - held in collaboration with Kelab Putra 1Malaysia, World of Motions and SBK Motoworks, aims to deliver rice, medical aid and other essential items to the marginalised Rohingya community in Myanmar’s Rakhine state.
Labels: 2016, en, Humanitarian mission, Malaysian Aid, News, Rohingya
Myanmar says it will not allow any unauthorised landing on its territory, sparking fears of possible confrontation.
Malaysia's government has been increasingly vocal about the harsh treatment of the Rohingya [EPA]
An aid flotilla carrying food and emergency supplies for Rohingya Muslims is to sail from Malaysia for Myanmar's Rakhine State in January.
Zulhanis Zainol, secretary-general of the Malaysian Consultative Council of Islamic Organisations, said on Friday that the coalition organising the flotilla had applied for permission to enter Myanmar through its embassy in Kuala Lumpur, but had yet to receiveareply.
" No non-Myanmar citizens can enter our body of water without our permission. If they do, we will respond - we will not attack them, but we will not receive them "
Zaw Htay, spokesman for Myanmar's presidential office
"If they are looking for trouble, we will not accept that," Zaw Htay, spokesman for the presidential office, told Reuters news agency.
The flotilla, departing from Malaysia on January 10, would be carrying 1,000 tonnes of rice, medical aid and other essentials for the Rohingya population.
Both Malaysia and Myanmar are members of the 10-nation grouping, which hasalong-standing policy of not getting involved in each other's internal affairs.
An estimated 150,000 to 200,000 Rohingya, displaced by previous violence, live in Malaysia.
Myanmar has previously said that access to Rakhine for humanitarian assistance would be open, but certain Rohingya communities have remained off-limits to aid agencies on security grounds.
Labels: 2016, Al Jazeera, en, Inside_Story, Video, Zaw Htay
( 30.12.2016 ) Nobel laureates urge UN to intervene in Myanmar's Rohingya crisis ( Duniya News TV )
More thanadozen Nobel laureates urged UN to end human crisis of Myanmar's Rohingya minority group.
UNITED NATIONS (AFP) - More thanadozen Nobel laureates on Thursday urged the United Nations to "end the human crisis" of Myanmar s Rohingya minority group, whose members have been fleeing to Bangladesh to escapeabloody military crackdown.
Labels: 2016, DASSK, en, Myanmar, News, Nobel, Rohingya, UN, UNSC
( 30.12.2016 ) Secret 1978 Document Indicates Burma Recognized Rohingya Legal Residence ( forbes.com )
Rohingya Muslim refugees along with Indian supporters shout slogans against human rights violations in Myanmar, duringamarch to the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) office in New Delhi on December 19, 2016. Myanmar faces growing pressure from its neighbors over claims its army has carried outabloody campaign of abuse against its Rohingya minority as ministers held emergency talks on the crisis. More than 27,000 from the Muslim ethnic group have fled northwestern Myanmar for Bangladesh since the start of November to escapeaheavy-handed military counterinsurgency campaign. PRAKASH SINGH/AFP/Getty Images
Labels: 1978, 2016, Andres Corr, Article, DASSK, Rakhine, Rohingya
( 30.12.2016 ) ဘင်္ဂလား ဒေ့ရ်ှရေပိုင် နက်အတွင်း မြန်မာ ဘက်မှ ပစ်ခတ်မှု အတွက် မြန်မာ သံအမတ် အား ခေါ်ယူသ တိပေး ခဲ့ဟု ဆို
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရေပိုင်နက်အတွင်း မြန်မာဘက်မှပစ်ခတ်မှုအတွက် မြန်မာသံအမတ်အား ခေါ်ယူသ တိပေး ခဲ့ဟု ဆို
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှ တံငါသည် များ အားပစ်ခတ်သည့် ကိစ္စနှင့် ပတ် သက်ပြီး မြန်မာရေတပ် အနေဖြင့် နောက်ပိုင်းတွင် ထပ်မံ လုပ်ဆောင်ခြင်း မပြုလုပ်ရန် အာမခံ ချက်ပေးရန်အတွက် သင့်လျော် သည့် စုံစမ်း စစ်ဆေးမှု များ ပြုလုပ် ရန် တောင်း ဆိုထားကြောင်း၊ ဖြစ် ပွားခဲ့သည့် ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး မြန် မာနိုင် ငံအား သတိပေး ပြောကြား ထားကြောင်း ဘင်္ဂါလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားသည်။
Labels: 2016, Diplomat, mm, MYN - BD
( 29.12.2016 ) Bangladesh demands Myanmar take back Rohingyas
Labels: 2016, Diplomat, en, MYN - BD, News, Refugee, Rohingya
( 29.12.2016 ) Indonesian Gov`t Sends Humanitarian Aid to Rohingya People
TEMPO.CO, Jakarta - The Indonesian government has sent humanitarian aid for Rohingya Muslims in Myanmar. President Joko “Jokowi” Widodo said that humanitarian relief was collected from Indonesian people, business owners and the government. “This morning, some 10 containers [of humanitarian aid] were sent to Rakhine State,” the President said today at Tanjung Priok Port, Jakarta.
Labels: 2016, AID, Diplomat, en, Humanitarian Aid, Indonesia, News, Rakhine, Rohingya
( 29.12.2016 ) Myanmar envoy handed protest note over firing
Bangladesh government today handedastrongly worded protest note to Myanmar over the latter’s firing on Bangladeshis at the Bay of Bengal yesterday.
Myanmar envoy Myo Myint Than was summoned at the Ministry of Foreign Affairs around 1:00pm this afternoon, ministry insiders told The Daily Star.
Bangladesh’s Foreign Secretary (bilateral) Kamrul Ahsan handedastrongly worded protest to the Myanmar envoy during the meeting, highly placed sources said.
Yesterday morning, Myanmar navy opened fire onaBangladeshi fishing trawler in the Bay of Bengal near St. Martin’s Island in Cox’s Bazar. Six fishermen were injured.
Bangladesh officials confirmed that the fishermen were inside the country’s territory when the unprecedented attack took place.
Previously, Bangladesh government had summoned the Myanmar envoy to express concerns over the influx of Rohingyas fleeing persecution in the Rakhine state of Myanmar.
Labels: 2016, BD, Diplomat, en, Myanmar, News
( 28.12.2016 ) မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာမှ ဒေါက်တာ အေးချမ်းဆောင်းပါး။
Labels: 2016, mm, သတင်းစာ, ဆောင်းပါး
Myanmar: Rohingya abuse by soldiers sparks diplomatic tension
Rohingya refugees: Thousands at risk from flooding yesterday
Singapore to deport Myanmar citizens for 'funding' Rakhine rebels
Labels: 2016, Al Jazeera, en, killed, Rohingya, Video
( 23.12.2016 ) ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းမှ စစ်သွေးကြွများ သမိုင်း ( ဧရာတီ )
By ဘာတေးလင့်တနာ 19 December 2016
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အခြားသော လူမျိုးစု ပဋိပက္ခ များထက် တမူထူးခြားနေပြီး ပြင်ပနိုင်ငံများ၏ အာရုံစိုက်မှုကို ရရှိစေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အနောက် မြောက် အစွန်အဖျားမှ မွတ်စလင် အသိုက်အဝန်းများသည် “မျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု” နီး ပါးဖြစ်နေသော “လူမျိုး သန့်စင်မှု”ကို ကြုံတွေ့ နေရခြင်း လား၊ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာ ပဋိပ က္ခစောင့် ကြည့် လေ့လာရေး အုပ်စု (International Crisis Group – ICG) မှ စာရေးဆရာ ၂ ဦးတို့က တိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ ပိုမိုရှည် လျားသော စာတမ်းတွင် ရေးသားထား သကဲ့သို့ “ကမ္ဘာ့ နောက် ဆုံးပေါ် မွတ်စလင် သူပုန်လက်သစ်” ဖြစ်ပါ သလား။
မည်သို့ဆိုစေ ၂၀၁၂ ဇွန်လက စတင်ခဲ့သော ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ဖြစ်ရပ်များသည် ကြေကွဲစရာတခု ဖြစ်ပြီး အုံကြွမှု နှိမ်နှင်းရေး စစ်ဆင်မှုများ အတွင်း မြန်မာလုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့များက ကျူးလွန်သော ပြင်းထန်သည့် လူ့အခွင်အရေး ချိုးဖောက်မှုဆိုင်ရာ ကျယ်ပြန့်သော စွပ်စွဲချက်များမှာလည်း ပျံ့နှံ့နေသည်။ ထိုနေရာကို ဂြိုဟ်တုမှ ရိုက်ကူးထားသော ဓာတ်ပုံများကမူ ရွာလုံးကျွတ် မီးရှို့ခံထားရသည်များကို ပြ သနေပြီး အောက် တိုဘာ ၉ ရက်နေ့ နယ်ခြားစောင့်ရဲကင်းများကို စစ်သွေးကြွတို့က တိုက်ခိုက်မှုအပြီး မြန်မာစစ်တပ်က ကြားဝင်ဟန့်တားခဲ့ရာ ထောင်ချီသော ပြည်သူများမှာ အိမ်နီးချင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးကြရ သည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၉ ဦးကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး ရဲကင်းများမှ လက်နက် ၅၀ ကျော်ကို လုယူသွားခဲ့ကြသော စစ်သွေးကြွ များမှာ လက်နက် အပြည့်အစုံ မရှိသော်လည်း ၎င်းတို့၏ တိုက်ခိုက်မှုများမှာမူ ကောင်းစွာချိတ်ဆက် လှုပ် ရှားကြခြင်း ဖြစ်ပြီး အခြေခံစစ်ရေး ပရိယာယ်များကို ကောင်းစွာ နားလည်ကြောင်း ပြသသည့် ရှင်းလင်း သည့် လက္ခဏာများ ရှိသည်။ ထိုကြောင့် ရိုဟင်ဂျာဟု သိကြသော ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းမှ မွတ်စလင် များသည် နိုင်ငံတကာ မီဒီယာများက မကြာခဏ ဖော်ပြကြသကဲ့သို့ ကမ္ဘာ့အဖိနှိပ် အခံရဆုံးသော လူမျိုး စုဖြစ်သည် ဟူသော အချက်ထက်ပို၍ နက်ရှိုင်းသည့် ဝိရောဓိ ရှိနေသည်ဟု ယူဆလျှင် ဆီလျှော်သည်။
ဒေသခံများခံစားနေရသော ဒုက္ခများကို လျှစ်လျှူ မရှုသော်လည်း ဤဒေသတွင် စနစ်ကျသည့် အစ္စလမ်မစ် စစ်သွေးကြွမှု ပေါ်ပေါက်လာနေသည် ဟူသည့် ပိုမိုများပြားသော အထောက်အထားများ ထွက်ပေါ် လာ နေပြီ။ စစ်တပ်၏ ပြင်းထန်သော တုံ့ပြန်မှုသည် ကျယ်ပြန့်သော အကျိုးဆက်များ ရှိလာနိုင်သည်။ “အာဏာ ပိုင်တွေက မီးနဲ့ ကစားနေကြတယ်” ဟု ဤကိစ္စနှင့် အကျွမ်းတဝင်ရှိသော သံတမန် တဦး က ပြောသည်။ “မွတ်စလင်လောကမှာ ဒီစစ်သွေးကြွတွေအပေါ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကရုဏာ သက်နေကြ တယ်” ဟုလည်း ၎င်းက ပြောသည်။ တဖန် ICG ၏ အဆိုအရ ပြောရလျှင် စနစ်တကျ မကိုင်တွယ် ပါက ပြင်ပထောက်ခံမှုဖြင့် ဘာသာရေး အုံကြွမှုသစ်၏ နိဒါန်းဖြစ်လာနိုင်သည်။
ဤပဋိပက္ခများ၏ နောက်ကွယ်မှ အဓိကခေါင်းဆောင်မှာ ပါကစ္စတန်ဖွား Abdus Qadoos Burmi ဖြစ် သည် ဟု ဆိုသည်။ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ကရာချိမြို့တွင် အခြေစိုက်ပြီး သူသည် လူမှုကွန်ယက်တွင် လွန်စွာ ပျံ့နှံ့ နေ သော ဗီဒီယိုတွင် ပါဝင်သလို သူ၏ အဖွဲ့ Harkat ul Jihad Islami-Arakan (HUJI-A) မှ ထုတ်ဝေသော စာ စောင်တွင်လည်း ပါဝင်သည်။ ထိုအဖွဲ့သည် အာရဗီဘာသာဖြင့် ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရေး လှုပ်ရှားမှု ဟုခေါ် သော Harakah al-Yaqin အမည်ရှိ ပိုမို အင်အားကြီးသည့် အဖွဲ့၏ အစိတ် အပိုင်း ဖြစ်နိုင်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှ မိဘများက ပါကစ္စတန်တွင် မွေးဖွားသော Qadoos Burmi သည် Lashkar-e-Taiba (LeT) မှန်ကန်သူတို့၏ တပ်ဖွဲ့နှင့် ၎င်း၏ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်း Jamat ud Dawah (JuD) တို့နှင့် နီးစပ်သူဟု ဖော်ပြ ကြသည်။ ထို ၂ ဖွဲ့လုံးကို ပါကစ္စတန်တွင် ပိတ်ပင်ထားသော်လည်း အနည်းနှင့် အများဆိုသလို ပြောင် ကျကျ ပင် ဆက်လက် လှုပ်ရှားနေကြသည်။ ဝီကီလိက ဖွင့်ချခဲ့သော ၂၀၀၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့ အမေရိ ကန် သံတမန် ကြေးနန်းတွင်ပင် LeT နှင့် ၎င်း၏ အခြားအမည် JuD တို့သည် နိုင်ငံတကာ အကြမ်းဖက် ကွန် ရက် al-Qaida ၏ လက်အောက်ခံ ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ လှုပ်ရှားမှုများ အတွက် ရန်ပုံငွေကို ဆော်ဒီအာရေးဗီး ယာ မှ အလှူဒါန အဖွဲ့ဟု ခေါ်သော အဖွဲ့များမှ ရရှိသည်ဟု ပါရှိသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ပထမ အကြိမ် အကြမ်းဖက်မှုများ အပြီး မကြာမီတွင် LeT နှင့် JuD တို့သည် ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာကို မီးမောင်း ထိုးပြရန် Difa-e-Musalman e-Arakan Conference ခေါ် လှုပ်ရှားမှု တခု ပြုလုပ် သည်။ ထိုနှစ် သြဂုတ်လတွင် ထောက်လှမ်းရေး သတင်းများက Shahid Mahmood နှင့် Nadeem Awan ဟု ဖော်ပြသော JuD မှ ထိပ်တန်းလှုပ်ရှားသူ နှစ်ဦးတို့သည် မြန်မာနယ်စပ်ရှိ စခန်းများမှ ရိုဟင်ဂျာများနှင့် ဆက် သွယ်ရန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသို့ သွားရောက်ခဲ့ကြသည်။ ဘာသာရေးနှင့် စစ်ပုံစံ သင်တန်းအချို့ ပေးခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ တချိန်တည်းမှာပင် LeT နှင့် ဆက်စပ်သော လှုပ်ရှားသူများသည် ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်ဒေသသို့ သွားရောက်ကာ စစ်သွေးကြွ ဖြစ်နိုင်သူများကို လေ့ကျင့်သင် တန်း ပေး ခဲ့သည်။
ရိုဟင်ဂျာ ထောက်ခံရေး လှုပ်ရှားမှုများသည် လူမှုကွန်ရက် ဆိုရှယ်မီဒီယာကို အသုံးပြုကာ ရခိုင်ပြည်နယ် တွင် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့များက ကျူးလွန်သည်ဟု စွပ်စွဲသော ရက်စက်သည့် ကျူးလွန်မှုများကို ပြသည့် ဓာတ်ပုံ များ၊ ဗီဒီယိုများကို ဖြန့်ချိရင်း မအားလပ်နိုင်တော့ပေ။ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများ ရှိသည်ကို မငြင်းဆန်သော် လည်း ဝါရင့် လူ့အခွင့်အရေး လေ့လာသူ များမှာ ထိုဒေသမှ လာသော ဓာတ်ပုံအတုများ အကြီးအ ကျယ် ဖြန့်ချိနေခြင်းကြောင့် အံ့သြတုန်လှုပ်ခဲ့ကြရသည်။ မကြာသေးမီကပင် ကမ္ဘောဒီယား ကလေး ငယ် တဦးကို ဒတ်ခ်ျတဦးနှင့် ကမ္ဘောဒီးယား နှစ်ဦးတို့ နှိပ်စက်နေသောပုံကို ဗြိတိန်သတင်း စာ ဒေးလီးမေးလ် (the Daily Mail) က ရိုဟင်ဂျာကလေးငယ်ကို မြန်မာစစ်သားများ နှိပ်စက်နေပုံ အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်က နာဂစ်မုန်တိုင်းတွင် သေဆုံးသူများ၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလက တရုတ်နိုင်ငံ စီချွမ်ငလျင် တွင် သေ ဆုံးသူများ၏ ဓာတ်ပုံများကိုလည်း ရိုဟင်ဂျာတို့အပေါ် အကြမ်းဖက်မှု အထောက်အထားများ အဖြစ် ဖြန့်ချိကြ သည်။ နိုင်ဂျီးရီးယား စစ်သွေးကြွများက ကွင်းပြင်တွင် ထားပြီး သတ်ဖြတ်ခံသော ခရစ်ယာန်များ၏ ပုံကို လည်း ရိုဟင်ဂျာများ သေဆုံးနေပုံဟု ပြောကြသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ယာဉ်တိုက် မှုကြောင့် သေဆုံးသော မွတ် စလင်တဦး၏ ပုံကိုပင် ရခိုင်ပြည်နယ် အကြမ်းဖက်မှု၏ သားကောင်ဟု ဆိုကြသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှ မီးရှို့ခံရသော ရွာများ၏ ဓာတ်ပုံအစစ်များကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သော လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့် အဖွဲ့ (Human Rights Watch – HRW) နှင့် အခြားသော လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုဆိုင်ရာ ခိုင်မာသော သတင်းများမှာ လုပ်ကြံ ဇာတ်လမ်းများနှင့် မှန်ကန်သော အချက်အလက်ကို ခွဲခြားရန် လွန်စွာ ဂရုစိုက်လာ ခဲ့ရသည်။ ၎င်းတို့ထံ ပေးပို့နေသော ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယို အများအပြားမှာ သိသာသော အတုများ ဖြစ်သည်ဟု ၁၅ နှစ်မျှ HRW အတွက် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု သတင်းများ လိုက်ပေးနေသော David Mathieson ၏ အဆိုအရ သိရသည်။ အချို့သော ရိုဟင်ဂျာ ထောက်ခံရေး အုပ်စုများသည် ဤသို့ လုပ်ဆောင်ခြင်း အားဖြင့် HRW ကဲ့သို့သော နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့များ၏ လုပ်ငန်းများကို လက်တွေ့တွင် ထိခိုက်စေသည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ “ လေးနက်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု အစီရင် ခံစာတခုကို ပုတ် ခတ်ပြောဆိုဖို့၊ ပညာရှင်တွေရဲ့ အစီရင်ခံစာကို အယုံအကြည် ကင်းမဲ့စေဖို့ သတင်း မှားတွေက မီး ထိုးပေး တယ်” ဟုလည် David Mathieson က ဆက်ပြောသည်။ “ရှုပ်ထွေးတဲ့ လူ့အခွင့် အရေး သတင်းအချက် အ လက်တွေ ထုတ်လွှင့်ဖို့ ဆိုရှယ်မီဒီယာကို စင်မြင့် အဖြစ် အလွဲသုံးစား လုပ်လို့ ရတာကို ပြနေပြီး အ သုံးပြု သူတွေ အနေနဲ့ သတင်းတွေ၊ ပုံတွေတွေ့တာနဲ့ ချက်ခြင်း ထိခိုက်တုံ့ပြန်မယ့် အစား မှန်-မမှန် စိစစ် မေး ခွန်းထုတ်ဖို့ လိုတယ်။ လူတွေက အကျပ်အတည်း ကြုံရင် သူတို့ရဲ့ စိတ်ခံစားမှုက တဖက်သတ် ပေါက်ကွဲ ကြပြီး မျှတတဲ့ သတင်းအချက်အလက် အပေါ်မှာ အခြေမခံ ကြတော့ဘူး” ဟုလည်း ၎င်းက ပြောသည်။
တိကျသော သတင်းနှင့် ကောလာဟလ အပါအဝင် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများသည် နိုင်ငံ တကာ မီဒီယာ၏ အဓိက အာရုံစိုက်ရာ ဖြစ်နေသဖြင့် ပြည်ပ သတင်းထောက် အများအပြား မှာ မြန်မာ ၏ လူမျိုးစု ပဋိပက္ခများနှင့် ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာကို တန်းတူ ထားလာကြစဉ် တချိန်တည်းမှာပင် နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၌ အစိုးရတပ်များနှင့် လူမျိုးစု လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အများ အပြား ကြားတွင် ပိုမိုပြင်းထန် ကြီးမားသော ပြည် တွင်း စစ် မီးဟုန်းဟုန်း တောက်နေသည်။ ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လက် မှတ် ရေး ထိုခဲ့သော ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် KIA မှာ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လမှ စတင်ကာ တိုက် ခိုက်ခံနေ ရ သည်။ လူ ၁ သိန်းကျော် နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေး နေရပြီး ကချင်ပြည်နယ် ရှိ ယာယီတဲ ဒုက္ခ သည် စခန်းများ တွင် နေထိုင်နေရသည်။ KIA စခန်းများနှင့် အရပ်သားကျေးရွာများမှာ ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက် ခံနေရသည်။
ရှမ်းပြည်နယ် အလယ်ပိုင်းနှင့် မြောက်ပိုင်းတွင် အစိုးရတပ်များနှင့် KIA ၊ ပလောင်၊ ကိုးကန့်၊ ရှမ်းတပ်များ အ ကြား တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေသည်။ ၁၉၈၀ နောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကြီးမား ဆုံးဖြစ်သော ထိုစစ်ပွဲ တွင် တိုက်ခိုက်ရေး ရဟတ်ယာဉ်များ၊ လေယာဉ်များ၊ အမြောက်ကြီးများကို အသုံးပြု တိုက်ခိုက်နေသည်။ တချိန်တည်းတွင် အစိုးရက ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်း ကြေညာထား သည်။ မြန်မာသတင်းထောက် များက မိတ်ဆွေ နိုင်ငံခြား သတင်းထောက်များအား ၎င်းတို့သည် နိုင်ငံ၏ ဆယ်စုနှစ် များစွာကြာပြီဖြစ်သော လူမျိုးစုပြဿနာကို သတင်းယူနေသည် ဟု ပြောလျှင် နိုင်ငံခြား သတင်းထောက်များက “ဒါဆို ခင်ဗျား ရိုဟင် ဂျာကိစ္စ ရေးနေတာလား” ဟု ပြန်မေးတတ်ကြ သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ပဋိပက္ခသည် မြောက်ပိုင်းကိစ္စ ကဲ့သို့ တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် ပုန်ကန်မှု ဖြစ်လာမည်မှာ မသေ ချာသေး သကဲ့သုိ့ ထိုကိစ္စသည် ဒေသခံစစ်သွေးကြွများ အနေဖြင့် ပြည်ပမဟာမိတ်များထံမှ မည်သို့သော အ ကူအညီ ရယူနိုင်မည် ဆိုသည့် အချက်ပေါ်လည်း မှီတည်နေသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းမှ မွတ်စလင် လွှမ်းမိုးသော မြို့နယ်များတွင် စစ်သွေးကြွ လှုပ်ရှားမှုများမှာ ထူး ထူးခြားခြား အောင်မြင်မှု မရှိလှပေ။ ဤဒေသတွင် ပထမဆုံးသော မွတ်စလင် ခုခံရေးတပ်ဖွဲ့ကို ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေး မရမီ ၁၉၄၇ ခုနှစ်သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ဘူးသီးတောင်၌ ဖွဲ့စည်း ခဲ့သည်။ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ Jafar Hussain ခေါ် Jafar Kawwal သည် ဒေသခံ လူသိများသော အဆိုတော် ဖြစ်ပြီး သူသည် ထိုဒေသကို ထိုစဉ်က လွတ်လပ်ရေး ရကာစက ပါကစ္စတန်နှင့် ပေါင်းလိုသည်။ အန္ဒိယက ပိုင်းခြားထားသော အရှေ့ပါကစ္စတန်နှင့် အနောက်ပါကစ္စတန်တို့ ပါဝင်သည့် ပါကစ္စတန် နိုင်ငံသည် ၁၉၄၇ ခုနှစ်သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်တွင် လွတ်လပ်ရေး ရသည်။ အန္ဒိယသည် သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် လွတ် လပ်ရေး ရသည်။ ယခင်က အန္ဒိယ၏ အရှေ့ဘင်္ဂလား ပြည်နယ်ဖြစ်သော အရှေ့ပါကစ္စတန်သည် ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် ခွဲထွက်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ ဖြစ်လာသည်။
ပထမဆုံး ပုန်ကန်မှုသည် ဘူးသီးတောင်၊ ရသေ့တောင်နှင့် မောင်တောမြို့နယ်များသို့ အလျင်အမြန် ပျံ့နှံ့ သွားသည်။ သို့သော် ပါကစ္စတန်က ထိုသူပုန်တို့၏ တောင်းဆိုမှုကို လက်မခံကြောင်း သေချာသောအခါ ၎င်းတို့က ဒေသတွင်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကို တောင်းဆိုကြသည်။ မြန်မာမွတ် စလင် ခေါင်းဆောင်များ ကလည်း ၎င်းတို့သည် အနောက်ဘက် နယ်စပ်မှ သူပုန်များကို မထောက်ခံကြောင်း ကြေညာကြသည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် အတူ လုပ်ကြံခံခဲ့ရသော အမျိုးသားခေါင်းဆောင် တဦး ဖြစ်သူ မွတ်စလင်ဘာသာဝင် ဦးရာဇတ် ကလည်း ၁၉၄၆ ခုနှစ်မေလ ၂၀ ရက်နေ့ကပင် စာနယ်ဇင်း များ၌ ထိုအဆိုပြု ပါကစ္စတန်ပြည်နယ်ကို မထောက်ခံဘဲ နိုင်ငံရှိ မွတ်စလင်အသိုင်းအဝိုင်းကို သတိပေးချက် တစောင်ရေးသား ထုတ်ဝေသည်။ ဦးရာဇတ်က မြန်မာမွတ်စလင်များသည် ၎င်းတို့ မွေးဖွားရာ နိုင်ငံတွင် ခိုင် မာလေးစားစရာ အသိုင်းအဝန်း ဖြစ်စေလိုသည်။ ထိုမှစ၍ ဤအယူအဆသည် မြန်မာမွတ်စလင်များ၏ ရပ် တည်ချက် ဖြစ်လာသည်။ ယခုရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်လာသော မွတ်စလင်ခွဲထွက်ရေးနှင့် လက်နက် ကိုင် အုံကြွမှုမှာ ထိုဒေသမှ မြို့နယ်များတွင်သာ ဖြစ်ခဲ့သည်။
အုံကြွမှု၏ခေါင်းဆောင် Jafar Hussain မှာ ၁၉၅၀ တွင် လုပ်ကြံခံရပြီး Cassim ဆိုသူက သူ့ကို ဆက်ခံ သည်။ ထိုအုံကြွမှုမှာ ၁၉၅၄ ခုနှစ် မုတ်သုန် စစ်ဆင်ရေး အပြီး ၁၉၅၀ ခုနှစ်များ အလယ်လောက်တွင် ငြိမ် သက်သွားသည်။ ၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် နောက်ဆုံးလက်ကျန် သူပုန်အနည်းငယ်သည် အစိုးရနှင့် သဘော တူ ညီချက် ရပြီး လက်နက်ချသည်။ ၎င်းတို့သည် မေယုနယ်ခြား အုပ်ချုပ်ရေးဒေသဟု ခေါ်သော ကိုယ်ပိုင် အုပ် ချုပ်ရေး ဒေသ ရရှိတော့မည် ဖြစ်သည်။
ထိုအစောပိုင်း သူပုန်များသည် ၎င်းတို့ကိုယ် ၎င်းတို့ ရိုဟင်ဂျာများဟု မခေါ်ကြဘဲ မူဂျာဟစ်များဟု ခေါ်ကြ သည်။ ၁၉၅၀ ခုနှစ်များ နှောင်းပိုင်းအထိ ရိုဟင်ဂျာဟူသော အမည်ကို မသုံးသေးဘဲ အစိုးရကလည်း ထို သတ်မှတ်ချက်ကို အသိအမှတ် မပြုသေးပေ။ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်း ဦးဆောင်သော စစ်တပ်အိမ်စောင့် အစိုးရကို ၁၉၅၈ ခုနှစ်က အာဏာလွှဲပေးရန် ဝန်ကြီးချုပ် ရာထူးမှ နုတ်ထွက်သွားခဲ့သော ဦးနုက ၁၉၆၀ ရွေးကောက် ပွဲတွင် ပြန်လည် အရွေးခံသောအခါ မွတ်စလင်မဲ လိုချင်သော ကြောင့် မေယုနယ်ခြား အုပ်ချုပ်ရေးဒေသကို ဖန်တီးခဲ့ပြီး ရိုဟင်ဂျာဟူသော အမည်ကိုလည်း အသိအမှတ် ပြုခဲ့သည်။
ရိုဟင်ဂျာ ဟူသော စကားလုံး၏ အစမူရင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ်မှာလည်း မရေရာချေ။ ရိုဟင်ဂျာ ထောက်ခံရေး အုပ် စု များကမူ စကော့လူမျိုး ပထဝီ၊ ရုက္ခဗေဒနှင့် သတ္တဗေဒပညာရှင် Francis Buchanan-Hamilton ၏ စာပေ များကို ကိုးကားကြသည်။ သူက ယခုရခိုင်ပြည်နယ် အနောက်မြောက်ပိုင်း ဒေသတွင် Rooinga ဟုခေါ်သော သူများ နေထိုင်ကြောင်း ၁၇၉၉ ခုနှစ်တွင် ရေးသားခဲ့သည်။ ထို Rooinga များသည် ယနေ့ ၎င်းတို့ကိုယ် ၎င်း တို့ ရိုဟင်ဂျာဟု ခေါ်ကြသော သူများ ဟုတ် မဟုတ်မှာလည်း သေချာရန် အလှမ်း ဝေး လှသည်။ ယနေ့တိုင် မြန်မာမွတ်စလင်များနှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံး ကျမ်းရင်းများ အနက် တခု ဖြစ်နေသေးသော ၁၉၇၂ ခုနှစ်က ဂျာမဏီတွင်ထုတ်ဝေသည့် မြန်မာနိုင်ငံမှ မွတ်စလင်များ- လူမျိုးစုတခုကို လေ့လာခြင်း The Muslims of Burma: A Study ofaMinority Group ကို ရေးသားသူ Moshe Yegar ၏ အဆိုအရ ရိုဟင်ဂျာဟူသော စကား၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ မေတ္တာပြည့်ဝသူများ “the compassionate ones” ဟူ၍ ဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် ရွာဟောင်းက ကျား “rwa-haung-ga-kyar” ဟူသော စကားက အဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲလာခြင်း ဖြစ်နိုင်သည် ဟု ဆိုသည်။ ရွာဟောင်းက ကျား ဟူသော စကားမှာ ရဲရင့်သူများဟု အဓိပ္ပာယ်ရပြီး ၁၇၈၀ ခုနှစ်က ထိုဒေ သကို ဗမာသိမ်းပိုက်ပြီးနောက် ဒေသခံ မွတ်စလင် စစ်သားများကို ပေးထားသော အမည် ဖြစ်သည်။ ၁၇၈၄ ခုနှစ်အထိ ရခိုင်သည် သီးခြား လွတ်လပ်သော ဘုရင့်နိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး ဗမာဘုရင်ဘိုးတော်ဘုရားသည် ထိုဒေ သကို သိမ်းရန် သူ၏ မွတ်စလင်စစ်သားများကို သုံးခဲ့သည်။ ထိုအယူအဆ မှန်ကန်ပါက ၁၇၉၉ ခုနှစ် က Rooinga များနှင့် ဘင်္ဂလီစကား၏ စစ်တကောင်း ဒေသိယစကား ပြောသော ယနေ့ ရိုဟင်ဂျာများကြား ဆက် စပ်မှု မရှိပေ။ ထိုဒေသတွင် ကျန်ခဲ့သော ထိုမွတ်စလင်စစ်သားများသည် မကြာမီ မြန်မာအမည်များ သုံး လာ ကြပြီး ၎င်းတို့မှ ဆင်းသက်လာသူများသည် ၎င်းတို့၏ ဘာသာကို ဆက်လက်ကိုးကွယ်စေကာမူ မြန်မာစ ကား သို့မဟုတ် ရခိုင်ဒေသိယစကားကို သုံးကြသည်။
စစ်တွေနှင့် စစ်တကောင်းကြား ဒေသသည် ထုံးစံအားဖြင့် အန္ဒိယတိုက်ငယ် အဆုံး အရှေ့တောင်အာရှဒေ သ စတင်ရာ နယ်စပ်ဒေသ ဖြစ်ကာ ယခုမြန်မာနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ် နှစ်ဖက်စလုံးတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် များနှင့် မွတ်စလင်များ ယခင်ပင် နေထိုင်ကြသည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်မှ ဗုဒ္ဓဘာသာများက ရခိုင်ဒေသိယ စ ကားကို ပြောကြပြီး ၎င်းတိုို့ ၁၉၄၀ ခုနှစ်များ နှောင်းပိုင်းတွင် Bohmong စော်ဘွား မောင်ရွှေဖြူ ထွင်သည့် စ ကားအတိုင်း မာရ်မ Marma ဟုခေါ်သည်။ မာရ်မ ဆိုသည်မှာ မြန်မာကို ရခိုင်သံဖြင့် ခေါ်သော အသံဖြစ် သည်။ ရခိုင်စကားတွင် မြန်မာစံဘာသာစကားနှင့် မတူ၊ ယပက်လက်သံ (Ya) ကို ရကောက်သံ (R) ဖြင့် အ သံ ထွက်ကြသည်။ ပါကစ္စတန်နှင့် မြန်မာတို့ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးနောက် နှစ်နိုင်ငံ နယ်ခြားမှာ နိုင်ငံတကာ နယ်ခြားမျဉ်း ဖြစ်လာပြီး လူမျိုးစုအမည် စရိုက်လက္ခဏာများ အရေးပါလာသည်။ အရှေ့ပါကစ္စတန်မှ ရခိုင်ဗုဒ္ဓ ဘာသာများက ၎င်းတို့သည် မာရ်မ ဖြစ်သည်ဟု ဆုံးဖြတ်ကြပြီးနောက် ဆယ်စုနှစ် ၁ ခု ကြာသောအခါ ဗြိသိ သျှခေတ် တလျှောက်လုံး စစ်တကောင်းသား Chittagonians ဟု သတ်မှတ်ခံရသော ရခိုင် အနောက်မြောက် ပိုင်းမှ မွတ်စလင်များက ရိုဟင်ဂျာအမည်ကို ပြန်လည် အသက်သွင်းကြကာ အဓိပ္ပာယ်သစ် ဖွင့်ကြသည်။ အရှေ့ပါကစ္စတန်/ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ မာရ်မ များသည် ထိုနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသား များ ဖြစ်လာကြသော်လည်း ရိုဟင် ဂျာများမှာ ၎င်းတို့ နေသော နေရာတွင် ထိုအဆင့်အတန်း မရခဲ့ပေ။ ၎င်းတို့ အများစုသည် ဗြိသိသျှခေတ် တလျှောက်လုံး ထိုနေရာတွင် အခြေချခဲ့ကြသော်လည်း ရခိုင်နှင့် မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ အများစုက ၎င်း တိုကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ တရားမဝင် လာရောက်ခြေချသူ ဘင်ဂါလီများဟု ခေါ်ကြသည်။
လူ့အဖွဲ့အစည်း နှစ်ခုအကြား ကာလရှည်ကြာစွာ ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့သော ပွတ်တိုက်မှုများသည် ၁၉၄၀ ခုနှစ်များ က ဂျပန်ခေတ် အတွင်း လွန်စွာ ပြင်းထန်လာသည်။ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာများက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ဗမာ့ လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်နှင့် ဂျပန်ဘက်မှ ရပ်ပြီး စစ်တကောင်းသား မွတ်စလင် အားလုံးနီးပါးကမူ ၎င်း တို့ ကို Mugh ခေါ် ရခိုင်ဖိနှိပ်မှုမှ အကာအကွယ် ပေးသော ဗြိသိသျှတို့ကို သစ္စာခံကြသည်ဟု C.E. Lucas Phillips ရေးသားသည့် The Raiders of Arakan စာအုပ်အရ သိရသည်။ ထို အသိုင်းအဝိုင်း နှစ်ခု လုံးတို့ သည် တဖက်နှင့် တဖက် အကြမ်းဖက်မှုများ ကျူးလွန်ခဲ့ကြပြီး စစ်ကြီးပြီးသော အခါ ၅၀၀၀၀ သို့မဟုတ် ၈၀၀၀၀ အထိ ရှိသော စစ်တကောင်းသားများသည် အရှေ့ဘင်္ဂလားသို့ ထွက်ပြေးကြကာ ၎င်းတို့ကို စခန်း များတွင် ချုပ်နှောင်ထားသည်။ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးသောအခါတွင်လည်း ပြန်မလာကြတော့ ဘဲ အများအပြား သည် အနောက်ပါကစ္စတန်သို့ ဆက်သွားပြီး ကရာချိမြို့တွင်းနှင့် အနီးအပါးတွင် အခြေချသည်။ နောင် ၁၉၅၀ ခုနှစ်များတွင် အချို့သည် ယနေ့ စစ်သွေးကြွများ ကို ထောက်ခံအားပေးနေ သည့် ကြီးမားသော ပြည်ပြေး အသိုင်းအဝိုင်း၏ နိဒါန်းဖြစ်သော ယခု အာရပ်စော်ဘွားများနိုင်ငံဟုခေါ်သော Sharjah သို့ ဆက် သွားကြသည်။
ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းကို အာဏာနောက်တကြိမ်နှင့် အပိုင်စား ရသွားစေသော ၁၉၆၂ ခုနှစ် စစ်အာဏာသိမ်းမှု သည် မေယုနယ်ခြား ဒေသအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၏ နိဂုံးပင် ဖြစ်သည်။ ရိုဟင်ဂျာ ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂနှင့် ရို ဟင်ဂျာ လူငယ်အဖွဲ့ချုပ် အပါအဝင် ရိုဟင်ဂျာ အဖွဲ့အစည်းအားလုံး မတရားသင်း ကြေညာခံရသည်။ ထို ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ ခေါင်းဆောင် Mohammad Jafar Habib အပါအဝင် အချို့သော တက်ကြွလှုပ် ရှားသူ များက ၁၉၆၃ မေလတွင် မြေအောက်သို့ ဝင်ရောက်သွားကြပြီး ရိုဟင်ဂျာလွတ်လပ်ရေး တပ်ဖွဲ့ (Rohingya Independence Force – RIF) ကို ထူထောင်ကာ ရိုဟင်ဂျာအမည်ကို ပထမဆုံး သုံးသော သူပုန်အဖွဲ့ ဖြစ် လာသည်။ ၎င်းအဖွဲ့သည် ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် ရိုဟင်ဂျာ မျိုးချစ်တပ်ဦး (Rohingya Patriotic Front – RPF) ဖြစ် လာသော်လည်း ယခင် RIF ကဲ့သို့ပင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် သိပ်မလှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့ဘဲ စစ်တကောင်း တွင် အခြေစိုက် ပြီး ရိုဟင်ဂျာတိုက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်သော စာအုပ်စာတမ်းများ ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
မြန်မာအစိုးရက တရားမဝင် လာရောက် နေထိုင်သူများကို စစ်ဆေးရန် ၁၉၇၈ ခုနှစ် မတ်လတွင် နဂါးမင်း စစ် ဆင်ရေးကို ပြုလုပ်သောအခါ ဤပြဿနာနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာက စိတ်ဝင်စားမှု ရရှိလာသည်။
ဇွန်လအရောက်တွင် အနည်းဆုံး ရိုဟင်ဂျာ ၂ သိန်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသို့ ထွက်ပြေးပြီး နိုင်ငံတကာကန့် ကွက် မှုနှင့် ရင်ဆိုင်ရသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ၎င်းတို့၏ အများစုကို ပြန်လည် ဝင်ရောက်ခွင့် ပေးရသော် လည်း ထောင်နှင့် ချီသော သူများမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက် နယ်စပ်တွင် နေရခြင်းသည် ပိုမိုအန္တရာယ်ကင်း သည် ဟု ယူဆကြသည်။ အလွန်အမင်း ကြွယ်ဝချမ်းသာသော ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား အလှူဒါနအဖွဲ့ Rabitat-al-Alam-al-Islami က ၁၉၇၈ ခုနှစ် အကျပ်အတည်းများ အတွင်း အကူအညီများ စတင်ပို့ပေးခဲ့ပြီး Cox’s Bazar ၏ တောင်ဘက် Ukhia တွင် ဆေးရုံတရုံ၊ ဗလီတခုနှင့် အစ္စလမ်ဘာသာရေး ကော လိပ်တခု ဆောက်ပေး ခဲ့သည်။
ရလဒ်မှာ အဖွဲ့၏ ပိုမိုစစ်သွေးကြွသော အစိတ်အပိုင်းများသည် RPF မှ ခွဲထွက်ကြပြီး ရိုဟင်ဂျာသွေးစည်း ညီညွတ်ရေး အဖွဲ့ (Rohingya Solidarity Organization – RSO) ကို ထူထောင်ကြသည်။ ရခိုင်ပြည် နယ်မှ ဆေးဆရာဝန် Muhammad Yunus ဦးဆောင်ပြီးနောက် ၎င်းအဖွဲ့သည် မကြာမီ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ ရိုဟင်ဂျာ အဖွဲ့အစည်းများ အနက် အဓိက အကျဆုံးနှင့် စစ်သွေးအကြွဆုံး အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်လာသည်။ ၎င်း၏ ပိုမို တင်းကျပ်သော ဘာသာရေးရပ်တည်မှုကြောင့် RSO သည် မကြာမီမှာပင် မွတ်စလင်လောကမှ အလား တူ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ထောက်ခံမှု ရလာသည်။ ထိုသို့ ထောက်ခံသော အဖွဲ့များတွင် ဘင်္ဂ လားဒေ့ရ်ှမှ အခြေ့ခံ ဝါဒီ Jamaat-e-Islami နှင့် ၎င်းထက် ပိုမို အစွန်းရောက်သော လူငယ်အဖွဲ့ Islami Chhatra Shibir ၊ အာဖဂန်မှ Gulbuddin Hekmatyar ၏ Hizb-e-Islami အဖွဲ့၊ ကက်ရ်ှမီးယားမှ Hizbe-ul Mujahideen နှင့် မလေးရှားမှ အစ္စလာမ်လူငယ်အဖွဲ့ Angkatan Belia Islam sa-Malaysia တို့ ပါဝင်သည်။ Ukhia အနီးရှိ RSO စခန်းများတွင် အာဖဂန် နည်းပြများကို တွေ့လာရပြီး RSO စစ်သွေးကြွ ၁၀၀ နီးပါး အာဖဂန်နစ္စတန် နိုင်ငံ Khost ပြည်နယ်တွင် Hizb-e-Islami စစ်သင်တန်း တက်ရန် သွားကြသည်။
RSO ခေါင်းထောင်ထလာခြင်းသည် ရခိုင်ပြည်နယ် အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင် ဒေသခံများကို နယ် စပ်ဖြတ် ကျော် ပြေးစေသော မြန်မာစစ်တပ်၏ အခြားသော စစ်ဆင်ရေးတခု ပြုလုပ်ချိန်နှင့် တိုက် ဆိုင်နေပြန်သည်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ်ဧပြီလတွင် ရိုဟင်ဂျာ ၂၅၀၀၀၀ ခန့်မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတွင် ခိုလှုံနေ ပြီး ဖြစ်ကာ ထိုစဉ်က ၁၉၉၁ ခုနှစ် ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲ၏ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား တပ်မှူး ဖြစ်သူ မင်းသား Khaled Sultan Abdul Aziz သည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမြို့တော် ဒက္ကာသို့သွား ရောက်လည်ပတ်ပြီး ကူဝိတ်တွင် ပြုလုပ် သကဲ့သို့ သဲကန္တာရ မုန်တိုင်း စစ်ဆင်ရေး (အမေရိကန်ဦးဆောင်သော ကူဝိတ်မှ အီရတ်များကို မောင်းထုတ်သည့် စစ်ဆင်ရေး အမည်) ပုံစံ စစ်ဆင်ရေးမျိုး မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ပြုလုပ် ရန် ပြောကြားသည်။ ထိုကိစ္စသည် လက်တွေ့ဖြစ်မ လာဘဲ ကုလသမဂ္ဂ၏ ဖိအားကြောင့် မြန်မာ သည်ဒုက္ခသည် အများစုကို ပြန်ခေါ်ရန် သဘောတူရသည်။
RSO သည် ဒေသမှောင်ခိုဈေးကွက်မှ အော်တိုမစ်တစ် ရိုင်ဖယ်များ၊ စက်သေနတ်များကဲ့သို့သော လက်နက် များနှင့် ရော့ကက် လောင်ချာများကဲ့သို့သော လက်နက်များလိုပြီး ၁၉၉၀ ခုနှစ်များ အစောပိုင်းတွင် ဘင်္ဂ လားဒေ့ရှ် မီဒီယာများသည် နယ်စပ်အနီး သူပုန်အင်အား တည်ဆောက်မှုများကို ကျယ် ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖော်ပြ ကြ သည်။ သို့သော် RSO စခန်းများတွင် သင်တန်းတက်ကြသူများမှာ ရိုဟင်ဂျာများသာမကကြောင်း ထင်ရှား လာသည်။ အများအပြားမှာ ၎င်းတို့၏ စစ်သွေးကြွ လှုပ်ရှားမှုများကို ဖုံးကွယ်ရန် RSO စခန်းများသို့ ရောက် လာသော Islami Chhatra Shibir အဖွဲ့ဝင်များ၊ စစ်တကောင်း တက္ကသိုလ်မှ လူများ ဖြစ်ကြသည်။ လက်တွေ့ တွင် RSO သည် မြန်မာပြည်တွင် တိုက်ခိုက်မှုများတွင် မပါသလောက်ပင် ဖြစ်သည်။ ထိုစခန်းများမှ ဗီဒီယို တိပ် များမှာ နောက်ပိုင်းတွင် ကဘူးရှိ အယ်လ် ကိုင်ဒါ အဖွဲ့တွင် ပေါ်လာပြီး ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်က အာဖဂန်ကို သိမ်းပြီးနောက် အမေရိ ကန် ကေ ဘယ်သတင်းရုပ်သံ CNN က ရရှိသည်။ ထိုဗီဒီယိုများကို အာရဗီဘာသာဖြင့် Burma ဟု အမှတ် အသားပြုပြီး ၂၀၀၂ သြဂုတ်လတွင် ကမ္ဘာတလွှားသို့ ပြသသည်။ ၎င်းတို့ကို တဖက်နယ်စပ် Ukhia တွင်ထက် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရိုက်ကူးသည်ဟု ပိုမိုယူဆရဖွယ် ရှိသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ပါကစ္စတန်နှင့် အခြားနေရာများမှ စစ်သွေးကြွများသည် အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးနေသောရိုဟင်ဂျာ များကို အမြတ်ထုတ်ကြပြီး ၎င်းတို့ကို အာဖဂန်နှင့် ကမ္ဘာအနှံ့မှ အယ်ကိုင်ဒါများ အတွက် အသုံးတော်ခံ အဖြစ် ပြုလုပ်ခဲ့သည်မှာ သံသယ ရှိစရာမလိုပေ။ ၁၉၉၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ကရာချိ အခြေစိုက် Ummat သတင်းစာနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းရာတွင် အိုစမာဘင်လာဒင် ကိုယ်တိုင်က “ကမ္ဘာတဝှန်း နေရာအနှံ့ ဘော့စနီးယားက ဆူဒန်အထိ၊ မြန်မာနိုင်ငံကနေ ကက်ရ်ှမီးယားအ ထိမှာ စိတ်ဓာတ် ပြင်းထန်တဲ့ ဂျီဟတ်ဝါဒီတွေ ရှိနေကြတယ်” ဟုပြောခဲ့သည်။ သူသည် Ukhia မှ RSO များကို ရည်ညွန်းပြောပုံရသည်။
ရိုဟင်ဂျာတပ်သားသစ် အများအပြားမှာ စစ်မြေပြင်တွင် အန္တရာယ် အများဆုံးအလုပ်များ၊ မိုင်းရှင်းခြင်းနှင့် ပေါ်တာအဖြစ် အခိုင်းခံကြရသည်။ ထောက်လှမ်းရေး သတင်းရင်းမြစ်များ၏ အဆိုအရ ရိုဟင်ဂျာတပ်သား သစ်များကို ကနဦးတွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှငွေ တာကာ ၃ သောင်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၂၅ ဒေါ်လာ) ပေးပြီး တလလျှင် တာကာ ၁၀၀၀၀၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၇၅၀ ဒေါ်လာ) ပေးသည်။ လူသစ်များကို နိပေါမှ ပါက စ္စတန်သို့ ပို့ဆောင်ပြီး လေ့ကျင့်ပေးကာ အာဖဂန်ရှိ စစ်စခန်းများသို့ ပို့သည်။
သို့သော် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ ရိုဟင်ဂျာများတွင် ပိုမိုအလယ်အလတ်ကျသူ အုပ်စုများလည်း ရှိပြီး ထိုသူများတွင် ရခိုင်ရိုဟင်ဂျာ အစ္စလမ်မစ် တပ်ဦး (Arakan Rohingya Islamic Front – ARIF) လည်း ပါဝင်သည်။ ၎င်းကို ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် RPF ဟောင်း အကြွင်းအကျန်များနှင့် RSO မှ ထွက်ပြေးလာသူ လက်တဆုပ်စာကို စုစည်း တည်ထောင်ပြီး ရန်ကုန်တွင် ပညာသင်ကြားခဲ့သူ Nurul Islam က ဦးဆောင်သည်။ သို့သော် ထိုအဖွဲ့တွင် လက်နက်ဟောင်းများ တပ်ဆင်ထားသည့် တပ်ဖွဲ့လက်တဆုပ်စာထက် မည်သည့်အခါကမျှ ပိုမရှိခဲ့ဘဲ ဘင်္ဂ လားဒေ့ရ်ှတွင်လည်း ကောင်းစွာ ခြေကုပ် မရခဲ့ပေ။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင်မူ ၎င်းသည် ရခိုင်ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသား အဖွဲ့ (Arakan Rohingya National Organization – ARNO) ဖြစ်လာပြီး အလယ်အလတ် ရပ်တည်မှုကို ထိန်းသိမ်းကာ စစ်တကောင်းနှင့် ကော့ဘဇားတွင် ပြည်ပြေးအဖြစ် ရပ်တည်ရုံသာ ရပ်တည်နိုင်သည်။
ယနေ့ခေတ်တွင်မူ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရက နယ်စပ်ကို ပိုမိုထိန်းချုပ်လာသောကြောင့် RSO နှင့် ARIF/ ARNO တို့မှာ အနည်းနှင့် အများ ဆိုသလို အလုပ်မဖြစ်တော့သော အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်နေသည်။ သို့သော် မကြာသေးမီက ရခိုင်ပြည်နယ်မှ တိုက်ခိုက်မှုများသည် ပိုမိုစစ်သွေးကြွသော ရခိုင်ပြည်နယ်မှ စစ်သွေးကြွမျိုး ဆက်တခု ပေါ်ပေါက်နေ ကြောင်း အထောက်အထား ပြသနေပြီး အောက်တိုဘာလက အကြီးအကျယ် လူ ထု လှုံ့ဆော်တိုက်ခိုက်မှုသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လက်နက်ကိုင်များဖြင့် ပထမဆုံးဝင်ရောက် ရန် ကြိုးစားမှု မဟုတ်ကြောင်း ပြသနေသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလနှင့် မေလက စစ်သွေးကြွအုပ်စု များသည် မောင် တောရှိ နယ်ခြားစောင့် ရဲစခန်းများကို အသေအပျောက် များသော တိုက်ခိုက် မှုများ ပြုလုပ် ခဲ့ကြသည်။ ထိုဖြစ်ရပ်များကို ပြည်တွင်း မီဒီယာများက ဖော်ပြခြင်း မရှိသလောက်ပင် ဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံး ၄ ဦးနှင့် ထို ထက်ပိုသော ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ထိုစဉ်က သေဆုံးခဲ့ကြသည်။
နောက်ထပ် စစ်သွေးကြွများကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံနှင့် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၏ လူသူအရောက်အပေါက် နည်း သော နယ်စပ် ဒေသများတွင် လေ့ကျင့်ပေးနေသည်။ ထို့အပြင် ဂျီဟတ် သို့မဟုတ် ဘာသာရေးစစ်ပွဲ အတွက် ရန်ပုံငွေများမှာလည်း အဓိက အားဖြင့် ကာတာနှင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝသော ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားနှင့် ပင်လယ် ကွေ့ နိုင်ငံများမှ ငွေကြေး ထောက်ပံ့သူများ ထံမှ ရောက်ရှိလာနေကြသည်။ ထိုအုပ်စုများသည် ဖိလစ်ပိုင်၊ မလေးရှားနှင့် အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံတို့မှ အစ္စလမ်မစ် အစွန်းရောက် အခြေခံဝါဒီများနှင့် အဆက်အစပ် ရှိကြ သည် ဟု သတင်းများ ထွက်နေသည်။ စစ်သွေးကြွ၊ လက်နက်တပ်ဆင် လေ့ကျင့် သို့မဟုတ် အခြားတနည်း နည်းဖြင့် စည်းရုံးထားသော သူ မည်မျှရှိသည်ကိုမူ အတိအကျ မသိရ သလို အဖွဲ့အစည်းများ၏ အမည်ကို လည်း မသိရပေ။ ၎င်းတို့၏ ခေါင်းဆောင်များ၏ အမည်မှာလည်း ပဟေဠိ ဖြစ်နေဆဲ ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ အများစု က အမည်အမျိုးမျိုး သုံးနေကြသည်။
ယနေ့ခေတ် စစ်သွေးကြွများသည် သတင်းများ အတိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ် အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင် အစ္စလမ် မစ် နိုင်ငံတော် ထူထောင်လို/မလို၊ သို့မဟုတ် အန္ဒိအပါအဝင် ဖြစ်နိုင်သော ဒေသတွင်း စစ်ဆင်ရေးများ အ တွက် နယ်မြေသစ် ရှာဖွေနေခြင်း ဟုတ်/မဟုတ်လည်း အသေအချာ မသိရပေ။ သို့သော် ၎င်းသည် နိုင်ငံတ ကာလေ့လာသူများ ယခုမှသာ စိတ်ဝင်စားလာသော ကြီးထွားနေသည့် လှုပ်ရှားမှုဖြစ်သည်မှာ သေချာသည်။ ထို့အပြင် ICG ၏ အဆိုလည်း မှန်ကောင်း မှန်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် ဒေသတွင်း အခြားနိုင်ငံများတွင် တည် ငြိမ်ငြိမ်းချမ်းမှုကို အကြီးအကျယ် ထိခိုက်သော မြန်မာနိုင်ငံမှ အစ္စလမ်မစ်လှုံ့ဆော်သော အုံကြွမှု၏ နိဒါန်း လည်းဖြစ်နိုင်သည်။
(ဘာတေးလင့်တနာသည် Far Eastern Economic Review ၏ သတင်းထောက်ဟောင်း တဦး ဖြစ်ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်၍ စာအုပ် အများအပြား ရေးသားပြုစုခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ သူ၏ Militancy in Arakan State ကို ဘာသာပြန်ဆို ဖော်ပြသည်)
Labels: 2016, Bertil Lintner, mm, Rakhine, Rohingya, ဧရာဝတီ
( 23.12.2016 ) တပ်မတော်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့က မီးရှို့ခြင်း၊ အဓမ္မပြုကျင့်ခြင်း၊ မတရား ဖမ်းဆီးခြင်း မရှိကြောင်း၊ ကျေးရွာများတွင် ရိုဟင်ဂျာဟု လှုံ့ဆော်မှုများရှိကြောင်း မီဒီယာများကို ပြောကြား ခဲ့သည့် ကျေးရွာ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း စာကြည့် တိုက်မှူး အသတ်ခံရ
တပ်မတော်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့က မီးရှို့ခြင်း၊ အဓမ္မပြုကျင့်ခြင်း၊ မတရားဖမ်းဆီးခြင်းမရှိကြောင်း၊ ကျေးရွာများတွင် ရိုဟင်ဂျာဟု လှုံ့ဆော်မှုများရှိကြောင်း မီဒီယာများကို ပြောကြားခဲ့သည့်ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း စာကြည့် တိုက်မှူး အသတ်ခံရ
သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် မောင်တောမြို့နယ် ငါးခူရကျေးရွာသို့ မြေပြင်ကွင်းဆင်း သတင်းရ ယူနေသည့် ပြည်တွင်း ပြည်ပမီဒီယာ (၁၃)ဦးပါ အဖွဲ့၏ မေးမြန်းမှုများကို ဖြေကြားခဲ့ရာတွင် တပ်မတော်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့က မီးရှို့ခြင်း၊ အဓမ္မပြုကျင့်ခြင်း၊ မတရားဖမ်းဆီးခြင်းမရှိကြောင်း၊ ကျေးရွာများတွင် ရိုဟင်ဂျာဟု လှုံ့ဆော်မှုများရှိကြောင်း မီဒီယာများကို ပြောကြားခဲ့သည့် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း စာကြည့်တိုက်မှူး အသတ်ခံရကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန သတင်းနှင့် စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း အထွေထွေမန်နေဂျာဦးစီး သော ပြည် တွင်း ပြည်ပ မီဒီယာများပါဝင်သည့် အဖွဲ့ဝင် (၁၃)ဦးသည် ဒီဇင်ဘာ (၂၁) ရက် ညနေပိုင်းတွင် ရခိုင်ပြည် နယ်ဖြစ်စဉ်များ သတင်းမှန်သိရှိနိုင်ရေး မြေပြင်ကွင်းဆင်းလေ့လာရန် ငါးခူရကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိ စဉ် ကျေး ရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း စာကြည့်တိုက်မှူးအဖြစ် လုပ်ကိုင်နေသည့် ဒုစ်မာမတ် (ခ) ရှူနာမျာအား ငါးခူရကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးနှင့် ငါးခူရအလယ်ရွာ လမ်းမပေါ်တွင် သိရှိလိုသည်များကို တွေ့ဆုံမေးမြန်း မှုများ ပြုလုပ် ခဲ့သည်။
သတင်းထောက်များ၏ မေးမြန်းချက်များအား ဖြေကြားခဲ့သူ ဒုစ်မာမတ် (ခ) ရှူနာမျာသည် ညနေ (၆) နာရီ တွင် နေအိမ်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိပြီး အဝတ်အစားလဲ၍ ရွာအတွင်းသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ရာ ည(၁၀) နာရီ (၄၅)မိနစ်အထိ နေအိမ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိခြင်းမရှိသဖြင့် ဒုစ်မာမတ် (ခ) ရှူနာမျာ၏ အစ်ကိုဖြစ်သူ ဒီလ်မူဟာမတ်မှ ၎င်း၏ညီ ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဂျော်ဂျီအောင် ထံ သွားရောက် သတင်းပို့ခဲ့ပြီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ တဆင့် ငါးခူရနယ်မြေရဲစခန်းသို့ ဆက်လက်အကြောင်း ကြားခဲ့သည်။
ငါးခူရနယ်မြေရဲစခန်းမှ ည(၁၂)နာရီတွင် ဒုစ်မာမတ်(ခ) ရှူနာမျာ ပျောက်ဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍လူပျောက်ကြေ ညာမှ (၂/၂၀၁၆)ဖြင့် အမှုဖွင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဂျော်ဂျီအောင်၊ ရပ်မိရပ်ဖ ဦးဆန်းဝင်းတို့ သည် လိုက်လံစုံစမ်းလျက်ရှိစဉ် မွန်းလွဲ(၂)နာရီခွဲတွင် ပျောက်ဆုံးသူ၏ အစ်ကိုဖြစ်သူက ဒိုးတန်းကျေးရွာ ကြား လယ်ကွင်းချောင်းစပ်နေရာတွင် မသင်္ကာဖွယ်သွေးကွက်များ တွေ့ရှိကြောင်း အကြောင်းကြားချက်အရ သွားရောက် စစ်ဆေးခဲ့ရာ စံပယ်ပင်ရင်းချောင်းအနီး လယ်ကွင်းစပ်တွင် သွေးဟုယူဆရသော (၁) ပေပတ် လည်ခန့် နီညိုရောင်သွေးကွက်အား တွေ့ရှိ၍ မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်း၊ အခင်းဖြစ် မြေပုံကြမ်းရေး ဆွဲခြင်း၊ သွေးဟုယူဆရသော ပေကျံနေသည့် ကောက်ရိုးစများ သိမ်းဆည်းခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဆက်လက်ရှာဖွေခဲ့ရာ ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက် နေ့လည်ပိုင်းတွင် ဒုစ်မာမတ်(ခ) ရှူနာမျာ၏အလောင်းကို စံပယ် ပင်ရင်းချောင်းထဲတွင် ဦးခေါင်းမပါ၊ ဝဲယားပေါင်းနှစ်ဖက်တွင် ဓားထိုးဒဏ်ရာ ၂ ချက်စီဖြင့် ပြန်လည် တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဒုစ်မာမတ်(ခ) ရှူနာမျာ အသက်ခံရမှုနှင့်ပတ်သတ်၍ အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်စေရေး စုံစမ်းဖော်ထုတ် လျက်ရှိပြီး ပြည်တွင်း ပြည်ပသတင်းမီဒီယာသမားများ၏ မေးမြန်းချက်အား ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပြီးနောက် ဤကဲ့သို့ အသတ်ခံရခြင်း ဖြစ်သည်။
ဒုစ်မာမတ်(ခ) ရှူနာမျာသူသည် တပ်မတော်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ကမီးရှို့ခြင်း၊ အဓမ္မပြုကျင့်ခြင်း၊ မတရား ဖမ်းဆီးခြင်း မရှိကြောင်း၊ ကျေးရွာများတွင် ရိုဟင်ဂျာဟု လှုံ့ဆော်မှုများရှိကြောင်း မီဒီယာများသို့ ထုတ်ဖော် ပြောကြား ခဲ့ သူဖြစ်သည်။
Muslim man,avillage volunteer librarian who answered no unjust arrests, and rousing as “Rohingya” had decapitated in northern Rakhine
It is learnt thataMuslim man,avolunteer librarian in northern Rakhine State was beheaded on Thursday after he refuted against the security forces of accusations such as arson attacks, rapes and unjust arrests by an independent media team comprising of 13 members from local and foreign medias conductingasurvey in Ngakhuya Village, in order to release the truth information.
Dus Mammad, also known as Runarmyar, who is currently volunteering as an in-charge of the village library, answered questions raised by the group of independent journalists comprising 13 reporters and photojournalists led by the general manager for News and Periodicals Enterprise, Ministry of Information at the village on 21st December.
Following the interview, he came back home at around6pm and changed his clothes and went out to the village. As he did not arrive back home till 10.45 pm, his elder brother Dil Muhamad informed the village’s head U Georgyi Aung and the Ngakhuya Police Station.
Ngakhuya Police Station opened the missing person case no (2/2016) regarding the absent of Dus Mammad, also known as Runarmyar at 12 pm.
While the village’s head, U Georgyi Aung and an elder of the village, U San Win probed the case together with the security forces, they were informed by his elder brother that he found some blood stains near Dotan Village. According to this inform, scrutinizing the accident area, the security forces found one-round-foot doubtful bloodstains near the farming of Saebapinyinn Stream, took report-photo, draftedamap and collected bloody straws. Continuing their investigation, the security forces found the body of Dus Mammad without his head and with two stabs on both thighs.
We are investigating the dead case of Dus Mammad in order to find the real case. It is learnt that he was killed after answering the questions of the media team comprising of local and foreign journalists.
Dus Mammad wasaperson who told the truth to the medias regarding the accusations on the military and police force such as arson, rape, unjust arrests and rousing as “Rohingya” in the village.
Labels: 2016, MDW, MIC